entsha buzz elithi "iphothifoliyo" ziye zaba ingxenye silulumagama lethu lesimanje. Kodwa akubona bonke futhi ngaso sonke isikhathi ukuthi yini lena, futhi kanjani kahle akha.
Eqinisweni, i-portfolio - umphumela ezifinyelelwe umuntu, nokuthi ngqo kunoma yimuphi umkhakha, futhi konke ukuphila kwakho. Amafolda ne imiphumela abazifezile ukuqoqa cishe yonke into. Inthanethi igcwele zonke izinhlobo amathiphu kanjani ukwenza iphothifoliyo.
Ekuqaleni bacabanga, njengoba umsizi ekuhloleni izinga lokwenza kanye nempumelelo yomuntu, iphothifoliyo manje ushaya ukwesaba othisha abaningi nge omkhulu wokufundisa nakho, ngoba ngokuvamile benza akubona bonke eqonda futhi amukela isidingo "ukuhlangana amaphepha." Ngaphezu kwalokho, umfundi ngamunye manje uzama ukwethula ngokwabo. Futhi abazali Sikhatsateke kakhulu indlela yokwenza iphothifoliyo yomfundi. Yebo, ngempela, wesikole! Izingane eziningi kakade ubudala zasenkulisa kukhona daddy emibalabala imiphumela abazifezile enkulisa.
Abafundisi nezazi eziningi asebeneminyaka eminingi angazi kanjani ukwenza iphothifoliyo.
Kodwa kubalulekile ngabo kabusha izitifiketi, bathuthukise amakhono abo, ukubhala imiphumela, futhi, njengoba othisha langempela nabafundi zabo. Indlela yokwenza iphothifoliyo? Othisha ubuthe daddy zazo ezimibalabala wonke amazwana, siyabonga izincwadi, izitatimende mayelana nokuphumelela oqeqeshiwe, yezifiso methodological yabangane izinkulumo njengengxenye kokubonisana ezingokwengqondo, odokotela kanye nokwenza amalungiselelo Pedagogical ngesisekelo sikhungo. Kufolda nge self-isethulo nguthishela sihlanganisa igunya ngentuthuko methodological noma imidlalo, amamodeli we ukuxhumana nomphakathi (Veterans, abazali, abameleli izinhlangano zamasiko).
Ukuze ukwazi ukuthi wenze iphothifoliyo, udinga ukwazi ukuthi uzodlala yiziphi izingxenye sihilela. uthisha Portfolio eqala izigaba ezilandelayo:
- Ulwazi mayelana uthisha noma ikhadi lebhizinisi. Lokhu icacisa ulwazi oluyisisekelo mayelana umuntu (usuku lokuzalwa, ngonyaka iziqu kanye neziqu, isipiliyoni somsebenzi, etholwe isigaba, nokunye okunjalo). Kule ngxenye, ukubekwa esifanele izithombe siqu.
- Imibhalo. Lesi sigaba kuhlanganisa, ngaphezu imibhalo kwezemfundo, zonke eqinisekisiwe yinhloko emakhophini izitifiketi ezidlulayo ukuqeqeshwa Yiqiniso, izitifiketi umhlanganyeli noma izingqungquthela Umlaleli, yezifiso nokunye.
- Umsebenzi methodical nguthishela. Lapha, ngokwesibonelo, zihlanganisa: ukuhlanganyela emisebenzini methodological yokuphatha izikhungo zemfundo kanye imincintiswano professional, ukutholakala izincwadi.
- umsebenzi Creative. Kanjani uthisha wenza indlela yokudala ekusebenzeni izingane nabazali bazo, kanye nosebenza nabo.
- Izimpumelelo kwebafundzi. Imiphumela ukuqapha kahle tifundvo, ukuhlaziywa izehlakalo, iqhaza futhi yokuphumelela izingane imincintiswano ehlukahlukene.
- Isihloko-Spatial imvelo. Smartly eklanyelwe okokusebenza didactic, isithombe ipasipoti kanye iKhabhinethi, izithombe onobuhle ahlukahlukene, tinkhulumo, izikimu.
- Ukubuyekeza uthisha. Siyabonga kubazali, ontanga, ukuzwa kukhulunywa ngezintaba yabezindaba.
- imisebenzi Outdoor uthisha. Ukuhlanganyela idolobha kanye zesifunda izenzakalo, isitifiketi uthunywa amajaji imincintiswano ehlukahlukene, methodical inhlangano ubuholi.
Uma ulandela lezi zincomo, ubunzima kanye indlela yokwenza kuphothifoliyo, ngeke kuphakama.